Warshadda Cover Cover Teendhada Shiinaha iyo saarayaasha | ShiningPlast
Cadeynteena Weyn ee Cimillada Cimilada Dhabarka ah ee Cimilada Dabeecadda Xirmooyinka Ilkaha ee loo yaqaan 'polypapapapa Teend Cover Cover Tarp' waxaa laga dhisay alwaax sareeysa oo cufan, labajibaarana xarig iyo aluminium aluminium ah oo loogu talagalay xoojinta xirnaanta iyo cimriga dheer.
Cadeynteena Weyn ee Cimillada Cimilada Dhabarka ah ee Cimilada Dabeecadda Xirmooyinka Ilkaha ee loo yaqaan 'polypapapapa Teend Cover Cover Tarp' waxaa laga dhisay alwaax sareeysa oo cufan, labajibaarana xarig iyo aluminium aluminium ah oo loogu talagalay xoojinta xirnaanta iyo cimriga dheer. Waxay muujisaa cimilada cimilada oo dhan, miridhku, caariyaysi, dillaaca, iyo iska caabbinta UV si ay u ahaato mid waara oo dib loo isticmaali karo marka la maydho. Ku habboon in lagu isticmaalo gaashaamayn ballaaran oo gaashaandhig ah iyo hoos-u-dhigga mashiinnada, doonyaha, gawaarida, xero-siinta, dhul-ku-dhisidda iyo dhismaha.
Miisaan 200-400 gsm
Indhaha Grommets-ga aluminium-rust-cadde ayaa u dhexeeyay 3 fuud.
Mid xoog leh oo waara Biyo kuleyl-qabasho iyo shaabadaysan si cimri dheeri ah.
· Tearproof: Cabbir u adkaysashada xoog badan ee taranka ayaa yareynaysa kala goynta inta lagu jiro gaadiidka iyo keydinta. Xadhig mataano ah oo isku dheelitir ah ayaa waxay siisaa xooga gantaalaha iyo adkeysiga ilmada.
Biyo-celin iyo dhammaan cimilada u adkaysata: waxay ka hortagtaa wasakhowga ama waxyeelada roobka ama qoyaanka.
· UV-Resistant: Waxaan u adeegsanay daaweynta ugu fiican UV iyo xasilinta si loo xaqiijiyo xasilinta inta lagu gudajiro mudada dheer ee UV. Qalabka HDPE wuxuu sameeyay biyo-celin iyo UV iska caabbinta
Hore: Cover Cover
Xiga: Netris Netris